Iimpawu kunye nokhathalelo lweAncistrus | Ngeentlanzi
I-Ancistrus luhlobo lweentlanzi zamanzi amatsha ezingasekhaya Loricariidae ukusuka kumyalelo weSiluriformes. Ezi ziintlanzi eziphambili kwiimali ze-aquarium. Banemilo ye-morphological ethi, nangona ekuqaleni bengatsali ngqalelo ininzi, baphela bengukumkani we-aquarium.
Inobunqabileyo kunye neqela elikhulu leentlobo ezenza ukuba laziwe kakuhle. Ngaba uyafuna ukwazi olu hlobo lwentlanzi kubunzulu? Apha siza kukuxelela yonke i-biology yabo kunye nokhathalelo oluyimfuneko lokuzigcina.
3 I-aquarium efanelekileyo
4 Izityalo kwi-aquarium
Kuyinyani ukuba njengentlanzi esezantsi kwentlanzi, banendawo yabo ebekelwe icorydoras. Nangona kunjalo, isibini seancistrus ngamaqabane afanelekileyo. Enye yezona ndlela zikhethileyo ukuba sifuna ukunika ubomi kwitanki lethu leentlanzi. Ngokubanzi, ezona ndawo ziphantsi nezona zifihlakeleyo ze-aquarium zezona zihlwempuzekileyo kwaye zibuhlungu. Nangona kunjalo, ezi ntlanzi zilungele ukuhamba kwezi ndawo kunye nokwandisa ubuhle be-aquarium.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba Umzimba wakhe uphela ugqunywe ngamathambo, Ngaphandle kwendawo esiswini. Oku kuyenza ikhetheke, kuba ayikho enye uhlobo lweentlanzi ezineempawu ezifanayo. Inekomityi yokutsala ekwaziyo ukunamathela kwizinto ezahlukeneyo. Iwusebenzisa ukufunxa ukutya okanye ukukhupha iselulose kumthi ofunyenweyo.
Ngokubhekisele kubungakanani bazo, amadoda adla ngokufikelela ubude obumalunga neesentimitha ezili-15. Kwelinye icala, abantu basetyhini bafumana umlinganiso we-10 cm. Ngaphandle kobukhulu, abesilisa nabasetyhini banomahluko ophawulekayo. Inkunzi ineebharbels okanye iintente ngaphezulu kwempumlo. Babizwa ngokuba zii-odontoids. Nangona kunjalo, kwabasetyhini olu luhlu lwezinto alukho. Kukho ezinye zeesampulu zabasetyhini ezinazo iintambo, kodwa zibekwe emaphethelweni empumlo. Ukongeza, ubungakanani bazo buncinci kakhulu kunobo bamadoda.
Le ntlanzi inemvelaphi yayo kwisitya se IAmazon nakwimilambo eyahlukeneyo yoMzantsi Merika. Indawo yokuhlala ayithandayo ngulo mlambo uneoksijini enkulu. Ezi ndawo zinama-algae amaninzi aqhuba i-photosynthesis kwaye, ke, ine-oxygenation ephezulu. Kodwa banendawo enexabiso elikhulu lokubola kwezinto eziphilayo.
Kwiindawo ezihlala kuzo le ntlanzi, kukho iitannins. Nangona ingaqhelekanga, kukho iintlobo ezithile zolu hlobo olukhetha amanzi acocekileyo.
Ukuze ezi ntlanzi zikwazi ukuhlala kwimeko entle, i-aquarium kufuneka ihlangane neempawu ezithile. Into yokuqala ekufuneka iqwalaselwe bubungakanani betanki. Kufuneka ibe yintoni inkulu ngokwaneleyo ukuba ingagcina iilitha ezingama-80 zamanzi ikopi nganye. Ukuba ivolumu incinci, ayizukukwazi ukubuphucula ngokupheleleyo ubungakanani bayo okanye ibonise indlela yokuziphatha.
Ezi ntlobo zinobume bendawo, ke kubalulekile ukuba i-aquarium ichaze iindawo ezahlukeneyo eziza kubakho kuzo iintlanzi. Iindawo zokuzimela ziyafuneka kubo nakwezinye iintlobo. Ngale ndlela banokwenza iikholoni kwiindawo ezahlukeneyo ze-aquarium njengoko kufuneka.
Kwimeko apho ufuna ukuba nesibini seancistrus okanye nangaphezulu, i-aquarium kufuneka ibe nkulu kakhulu ngobukhulu. Kuyimfuneko ukuze kungabikho mfazwe phakathi kwamadoda kwaye nganye iphawula indawo yayo. Ukucoca ulwelo olufunekayo ukuze i-aquarium ibe nemisinga eqhubekayo kunye neoksijini elungileyo. Ngale ndlela, indawo yokuhlala yendalo ye-ancistrus inokuphinda yenziwe ngokugqibeleleyo.
Njengoko besesitshilo ngaphambili, isincedisi sifunxa iselulosi emthini. Ke ngoko, kubalulekile ukuba kukho iinkuni kwitanki leentlanzi.
Ngokubhekisele kwi-substrate, kungcono ukuba ube mncinci ukuze uphephe ukusikeka okunokwenzeka. Kuya kufuneka ucinge ukuba ezi ntlanzi ziya kujikeleza emazantsi etanki. Ngenxa yoku, ukungqubana kwemiphetho yegrabile kungabenzakalisa.
Ukucoca kufuneka kube nakho ukumelana nomthwalo onzima wenkunkuma eveliswa yintlanzi. Ngokufanelekileyo, uhlobo olukhulu lokucoca ulwelo.
Akucetyiswa ukuba i-aquarium ityalwe ngolunye ulwelwe lwangaphambili. Ezi ntlanzi zinokuba gross kakhulu kwaye ziphele zisophula zonke iziqu okanye uzitye. I-ancistrus itshabalalisa yonke indawo edlula kuyo. Oku kusinceda sazi ukuba akufuneki sibenento yokuphakamisa okanye izityalo eziphazamisa ukusebenza kwemisinga yamanzi.
Kwezi ntlanzi bathanda iindawo ezinomthunzi. Umbono olungileyo wokutyala kukuba nezityalo ezibanzi ezinamagqabi anje ngeeanubias ezinkulu, echinodorus, kunye necryptocoryne. Oku kuya kukunika indawo ezinomthunzi zokufihla kunye nokuseka intsimi.
Izidingo zalo zesondlo zilula kakhulu ukuzigcina. Inokutyiswa ngezinye iipilisi zangasemva, nangona kungcono ukuzinika ukutya okwahlukeneyo kweziqhamo kunye nemifuno. Njengamaxesha onke, indalo ibhetele kunokufakelwa. Ukuba siyondla ngendlela esempilweni kwaye elungeleleneyo, izincedisi zethu ziya kukhula ngombala onomtsalane kunye nempilo engcono.
Xa sisebancinci, kuhlala kukho iingxaki ngokondla. Kule meko, i-fry nayo ityiswa iziqhamo kunye nemifuno. Unokunikwa ukutya okubandayo kunye nokutya ukuze andise ukutya kwakhe kwiprotein.
Ukuzalisa ezi ntlanzi ekuthinjweni kulula kakhulu. Iinkunzi ke zona ziphethe umsebenzi wokukhathalela amantshontsho emva kokuzala. Xa i-yolk sac yabo yaphuka kwaye bakwazi ukuhlala bodwa, inkunzi iyayeka ukubakhathalela.
Ukuze abantu basetyhini benze inani elikhulu lokuzala kunye nomgangatho ongcono kufuneka sithathe isibini esinye seancistrus kwi-aquarium eyahlukileyo. I-aquarium kufuneka ibe nomthamo wamanzi ayi-120 yeelitha kwaye inemithi emininzi. Ukubenza bakhuseleke, beka kwindawo yokuhlala apho baziva bepholile.
Ukuba nathi sine ii-aquariums ezinkulu ezingaphezu kweelitha ezingama-300 zamanzi sinokugcina iinkunzi ezimbini ngenkunzi enye okanye nangaphezulu. Ke, indoda nganye iya kukhetha kwaye iphawule icala elinye le-aquarium njengenxalenye yommandla. Imazi iya kuba nakho ukubeka amaqanda kunye neenkunzi zombini kwaye ibe namaqela amaninzi ngexesha elinye.
Ngolu lwazi unokufumana i-ancistrus yakho ikwimeko entle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » I-Ancistrus